Maxamuud Sayid;”Waxaan ku suganahay dhul u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya” | Jowhar Somali news Leader
Home News Maxamuud Sayid;”Waxaan ku suganahay dhul u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya”
Maxamuud Sayid;”Waxaan ku suganahay dhul u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya”
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in isaga iyo ciidamo ka tirsan Jubbaland ay ku sugan yihiin meel u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya oo ah No Man’s Land.
Wareysi uu siiyay Laanta afka soomaaliga ah ee Bbcda ayuu Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ku sheegay in uu booqasho ugu tegey ciidamadaas.
“Waxaan ku sugannahay xaduuda u dhaxeyso Mandheera iyo Beled Xaawo oo ah dhulka la yiraahdo No man’s land, waxaan kusoo booqday ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland o aaggaas joogaa”, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan Madaxweyne ku xigeenka 1aad ee Jubbaland.
Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in ciidamadii Jubbaland ay degeen saldhig cusub oo dhinaca ciidamada ah.
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa beeniyay in ciidamada Jubbaland ee dhowaan kula dagaalamay magaalada Beledxaawo ciidamada dowlada federalka ay garab ka helayeen dowlada Kenya.
Xaalada ammaanka magaalada Beledxaawo iyo nawaaxigeeda ayaa degen,hase yeeshee waxaa jira cabsi la xiriirta in markale ay ku dagaalamaan ciidamada maamulka Jubba iyo ciidamada dowlada federalka dhowaan geysay magaalada Beledxaawo.